विश्वको सबैभन्दा लामो नदी: नील र अमेजन बीचको विवाद | Absolut यात्रा
संसारमा सबैभन्दा लामो नदी
संसारको सब भन्दा लामो नदी सायद त्यस्तो होइन जुन हामी सबैले सोधेको प्रश्न हो। वा, कमसेकम, यो केवल एक मात्र होइन। किनभने विज्ञान सहमत समाप्त गर्दैन यसको बारे मा, यो मापदण्डको बारेमा पनि निर्णय लिनु हुँदैन।
निश्चित रूपमा, यदि तपाइँले विश्वको सबैभन्दा लामो नदी भनेर भन्नु छ भने, तपाइँ इशारा गर्नुहुन्छ अमेजन। र तपाईं पूर्ण रूपमा गलत हुनुहुने छैन। यद्यपि धेरै विशेषज्ञहरू, जो अन्य विशेषताहरूमा आधारित छन्, तपाईंलाई भन्दछ कि यो हो नील। सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा यो हो कि हामी सबै ठीक छौं। यो कुन मापदण्डमा हामी आफैमा आधारित छ निर्भर गर्दछ।
1 विश्वमा सब भन्दा लामो नदी कुन हो भन्ने निर्णयका लागि मापदण्ड
2 नील, लम्बाइका आधारमा विश्वको सबैभन्दा लामो नदी
2.1 ताल भिक्टोरिया
2.2 असवान बाँध
2.3 पुरानो शहर Meroe
2.4 राजाहरूको उपत्यका
3 अमेजन, पानीको प्रवाह द्वारा विश्वको सबैभन्दा ठूलो नदी
3.2 इक्विटोस, पेरुभियन अमेजन
3.3 मानौस, अमेजनसको राजधानी
3.4 Belém, अमेजनमा प्रवेश
विश्वमा सब भन्दा लामो नदी कुन हो भन्ने निर्णयका लागि मापदण्ड
एक प्राथमिकता, यो नदी को आयाम स्थापना गर्न सजिलो लाग्न सक्छ। यो यसको जन्म बिन्दु र यसको मुख लिन र दूरी मापन गर्न पर्याप्त हुनेछ। जहाँसम्म, ती शारीरिक सीमाहरू सेट गर्न पनि सजिलो छैन। अवस्थित सहायक च्यानलहरू जो एकल च्यानल बनाउन सामेल हुन्छन्। तसर्थ, नदी कहाँ सुरु हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ।
थप रूपमा, जबकि केही विशेषज्ञहरूको मापदण्डमा निर्भर छन् लम्बाई, अरूले यसलाई हेरेर यसको प्रवाह। त्यो हो, पानीको घन मिटरमा जुन समुद्रमा डिस्चार्ज हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा, यदि यो स्थापित गर्ने हो जुन विश्वको सबैभन्दा लामो नदी हो, पहिलो मापदण्ड बढी भरपर्दो देखिन्छ। यद्यपि विज्ञान दुबैलाई स्वीकार्छ।
तसर्थ, हामी गर्न सक्ने उत्तम तपाईंलाई प्रस्ताव छ सबै डाटा उल्लेख गरिएको दुई नदीहरूसँग सम्बन्धित छ कि तपाईं आफ्नो राय बनाउन सक्नुहुन्छ। र, संयोगवश, हामी हाम्रो यात्रा मा सम्झौता पछि वेब, हामी तपाईंलाई तिनीहरूमा जाने सबैभन्दा राम्रा ठाउँहरू देखाउँनेछौं।
नील, लम्बाइका आधारमा विश्वको सबैभन्दा लामो नदी
हामीले तपाईंलाई पहिल्यै भनिसकेका छौं, नील नदीको जन्म स्पष्ट छैन। यो यसमा गर्न ज्ञात छ पश्चिमी तन्जानिया र धेरै विशेषज्ञहरु मा यसको मूल राख्छ ताल विक्टोरिया। तर यो विशाल तालको पानी नदीहरूले आपूर्ति गर्ने भएकोले त्यहाँ वैज्ञानिकहरू छन् जसले नील नदीको स्रोत पत्ता लगाउँछन्। कागेरा नदी, यसको सबैभन्दा ठूलो सहायक नदी।
यो दुविधा प्रासंगिक छ किनभने, पहिलो केसमा, महान अफ्रिकी नदीको लम्बाई हुनेछ ,6650००,००० किलोमिटर। यद्यपि, दोस्रोमा, त्यो यदि कागेरालाई जन्मस्थानको रूपमा लिइन्छ भने यो यात्रा गर्दछ ,6853००,००० किलोमिटर.
जटिल चीजहरू समाप्त गर्नका लागि, यस नदी कोलोससको दुईवटा शाखाहरू छन्। पहिलो कल हो सेतो नील, जसको जन्म को देश हुनेछ रवान्डा र यो महान ताल क्षेत्र पार गर्दछ। यसको अंशको लागि, दोस्रो हुनेछ निलो नीलमा जन्मिएको छ, जो ताल टाना, सबैभन्दा ठूलो इथियोपिया, र मार्फत जान्छ सूडान यस देशको राजधानी नजिक पहिलो पहिलो सामिल हुन, खार्तोम.
अन्तमा, यो भूमध्यसागरको दक्षिण पूर्वमा तथाकथितको रूपमा खाली हुन्छ नाइल डेल्टा दश देशहरू पार गरिसकेपछि। तर थपमा, अफ्रिकी नदीमा अमेजन भन्दा कम प्रवाह छ। यसले एट्लान्टिक महासागरमा औसत २००,००० घन मिटर बचाउँछ, जबकि नीलले पानीको मात्रा बोक्छ। XNUMX गुणा कम। र अमेजन पनि फराकिलो छ किनकी यसको फराकिलो स्ट्रेचमा यो एघार किलोमिटर चौंडासम्म पुग्छ।
अर्कोतर्फ, हामीले तपाईंलाई वचन दिएझैँ, हामी तपाईंलाई केही सल्लाह दिने छौं सब भन्दा सुन्दर ठाउँहरु जुन तपाईं नील नदीको किनारमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
यसको लगभग सत्तरी हजार वर्ग किलोमिटरको साथ, यो सुपीरियर पछि, विश्वको दोस्रो ठूलो ताल हो कानाडा। यसको किनारमा तीन राष्ट्रहरू सामिल छन्: तान्जानिया, युगान्डा y केन्या र रानीबाट यसको नाम प्राप्त गर्दछ इ England्ल्यान्डको जीत.
यस्तो विस्तारको साथ, यो तार्किक छ कि यसमा प्राकृतिक आश्चर्यहरू छन्। तपाइँलाई एक उदाहरण दिन, हामी उल्लेख गर्नेछौं मोर्चिसन फल्स वा काबालेगा जुन युगान्डाको हो र जसले एक राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जन्म दिएको छ। तिनीहरू वास्तवमा तीन ठूला झरनाहरूको सेट हो जुन अधिकतम forty forty forty मिटर अग्लो हुन्छ।
यद्यपि यो प्राकृतिक स्मारक होइन, हामी यस बाँधको बारेमा कुरा गर्दैछौं किनकि नील नदीको लागि यसको पूँजी महत्त्व छ। वास्तवमा यो दुई बाँधबाट बनेको छ, उच्च र कम। तर सब भन्दा दर्शक पहिलो हो, गत शताब्दीको पचासको दशकमा निर्मित।
यो विशाल इन्जिनियरि engineering कार्य हो जुन नदीलाई बग्नबाट बचाउन कार्यान्वयन गरिएको थियो। यसको विशाल आकारले तपाईंलाई यो तथ्यको कल्पना दिन्छ कि यो लगभग मापन हुन्छ चार किलोमिटर लम्बाई y लगभग एक सय र दश अग्लो। यसको आधार मोटाई को रूप मा, यो छ लगभग एक किलोमिटर.
ताकि तिनीहरू हराएनन्, काम सम्पन्न हुनुभन्दा अघि त्यस क्षेत्रमा रहेका धेरै स्मारकहरू सर्न आवश्यक थियो। ती मध्ये, देबोड मन्दिर, म्याड्रिडमा सारियो। तर पनि ती रामसेस II र Dendur को, क्रमशः खार्तोम र न्यूयोर्कमा लगियो।
पुरानो शहर Meroe
मा स्थित छ सूडान, को राजधानी थियो कुशको राज्य, दुई मध्ये एक जुन पुरानो बनेको थियो Nubia। यसको अस्तित्व ईसापूर्व सातौं शताब्दीको हो, तर यो लगभग 350 XNUMX० एडीमा ध्वस्त भयो। यद्यपि पर्खालका अवशेषहरू संरक्षित छन्, शाही दरबार, the आमुनको ठूलो मन्दिर र अन्य नाबालिगहरु। यो मिश्री क्षेत्रहरू जत्तिकै रमाईलो छैन जुन हामी अर्कोको बारेमा कुरा गर्नेछौं तर यो एक हो विशाल पुरातात्विक मूल्य.
नीलको किनारमा पनि संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्मारकहरू छन्: प्राचीन मिस्रको। यी मध्ये, राजाहरूका उपत्यकामा अवस्थित ती बाहिर खडा हुन्छन् जुन फलस्वरूप यससँगै आउँछ पुरातन थेबेस एक घोषणा सेट विश्व सम्पदा.
उपत्यका नयाँ राज्यका विभिन्न फारोहरूको चिहानहरू मिलेर बनेको छ र उनीहरूको नजिकै भव्य हो। लक्सर र कर्नाकको मन्दिर, साथै तथाकथित क्वीन्सको उपत्यका, यी चट्टानमा उत्खनन को चिहान संग। निस्सन्देह, यो नील नदीको किनारमा अवस्थित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्मारकहरू मध्ये एक हो, जहाँ तपाईं अन्य थुप्रै चमत्कारहरू देख्न सक्नुहुन्छ, तर अब हामी अमेजनमा केन्द्रित हुने छौं।
अमेजन, पानीको प्रवाह द्वारा विश्वको सबैभन्दा ठूलो नदी
यसको अंशको लागि, अमेजन नील भन्दा थोरै छोटो छ तर यसको लम्बाई पनि विवादास्पद हो। हाइड्रोग्राफिक कार्टोग्राफरहरू आफैं असहमत छन्।
संयुक्त राज्य नेश्नल पार्क सेवाका अनुसार अमेजनको लम्बाई छ ,6400००,००० किलोमिटर। यद्यपि ब्राजिलियन भूगोल र तथ्या .्क संस्थानले केही वर्ष अघि एउटा अध्ययन प्रकाशित गरेको थियो जसमा भनिएको छ कि यो ठूलो नदी उत्तरमा होइन तर पेरुको दक्षिणमा बग्छ, जुन त्यस बेलासम्म अनुमान गरिएको थिएन। त्योसँग, अमेजनले नील नदीको लम्बाइ बढायो। तर यो विवाद अझै जीवित छ र प्रायः वैज्ञानिकहरू अझै पनि अफ्रिकी नदीलाई लामो मान्दछन्।
जे भए पनि, यदि लम्बाइको सट्टा प्रवाह वा चौडाई उपायको रूपमा लिइयो भने, अमेजनले फेरि नील नदीलाई हरायो। पहिलेको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण अमेरिकाको ठूलो नदी अटलान्टिकमा बग्छ औसत २,००,००० क्यूबिक मिटर प्रति सेकेन्ड। र चौडाइको बारेमा, अमेजनले यसको मुख्य सेक्सनहरू मापन गर्दछ ,11००,००० किलोमिटर। अर्को शब्दमा, अर्को एक किनारबाट मात्र दृश्यमान छ।
अर्कोतर्फ, हामीले नील नदीको साथ गरेका छौं, हामी तपाईंलाई केही देखाउन जाँदैछौं सब भन्दा सुन्दर ठाउँहरु जुन तपाईं दक्षिण अमेरिकाको महान नदीको पात्रमा देख्न सक्नुहुन्छ।
नदीले सार्ने पानीको प्रशस्त मात्रामा यो तथ्यको लागि जिम्मेवार छ कि यसको किनार विश्वको सबैभन्दा ठूलो जgle्गलमा रहेको छ जुन ठ्याक्कै भनिन्छ। Amazon। यो पृथ्वीको लागि एक साँचो फोक्सो हो र यसको एक छ incalculable पारिस्थितिक मान दुबै यस कारणका लागि र किनभने यसमा वनस्पति र जीव जन्तुहरूको एक विशाल सम्पत्ति छ।
यद्यपि यो भाग हो विश्वका सात प्राकृतिक आश्चर्यदुर्भाग्यवस, अमेजन इकोसिस्टम ठूलो लगिging बहुराष्ट्रियहरूको गतिविधि र अन्य कारणहरूले वर्षौंसम्म खतरामा छ।
इक्विटोस, पेरुभियन अमेजन
यो सम्पूर्ण पेरू इमेजोनमा सब भन्दा ठूलो सहर हो र यात्रुहरू लिन तयार छ। दुर्भाग्यवस, यो कलको मुख्य स्थानहरू मध्ये एक थियो रबर ज्वरो त्यसले धेरै क्षेत्रलाई तहसनहस पार्‍यो।
यसमा तपाई सुन्दरलाई भेट्न सक्नुहुन्छ क्याथेड्रल, २० औं शताब्दीको सुरूमा नव-गोथिक मार्वल निर्माण गरियो। र पनि कासा डेल फिअरो, कोहेन र मोरेपुरानोको रूपमा होटल पैलेसशैलीको एक चमत्कार कला डेको। को प्लाजा डे आर्मस, जहाँ तपाईं नायकको ओबिलिस्क देख्न सक्नुहुन्छ।
मानौस, अमेजनसको राजधानी
हामी आफैंलाई शब्दहरूमा यो प्ले गर्न दिन्छौं यद्यपि यो शहर, तार्किक रूपमा, समग्रमा अमेजन वर्षावनको राजधानी होइन, तर ब्राजिल राज्यको हो। अमेजन। वास्तवमा यो ज the्गलको बिचमा अवस्थित छ र यसको नाम पुर्तगाली संस्थापकहरू मानौस भारतीयहरूलाई तिर्ने श्रद्धांजलि हो जुन यसबाट उत्पन्न भएको हो।
यसको स्नायु केन्द्र हो सान सेबास्टियन स्क्वायर, जहाँ मूल्यवान र प्रभावशाली छ Amazonas थिएटर। हामी तपाईंलाई यस ऐतिहासिक केन्द्रको भ्रमण गर्न सल्लाह दिन्छौं, रबर रशको समयमा यसको धेरै भव्य घरहरू सहित; को एडोल्फो लिस्बन बजार, सय भन्दा बढी वर्षको इतिहासको साथ, र अमेजनका मानिसहरुको सांस्कृतिक केन्द्र, आदिवासीहरूको बारेमा एक शानदार संग्रहालय जुन प्राचीन कालदेखि नै ठूलो जंगलमा बसोबास गर्थ्यो।
अमेजनस थिएटर, मानौसमा
Belém, अमेजनमा प्रवेश
यो ब्राजिलको शहर एक मुख्य मानिन्छ अमेजनमा गेटवेकिनकि यो नदीको मुखमा नै छ। यो ब्राजिल क्षेत्रको राजधानी पनि हो Pará र यसमा पुरानो सहर राज्य र दरबारहरू र संग्रहालयहरूले भरिएको छ।
उनीहरूले यो पनि प्रकाश पार्छन् Catedral Metropolitana, एक क्लासिक कलाकार रत्न, र भगवान संतो क्रिस्टो डे प्रेसपियो डे बेलमको महल। थप रूपमा, यो Ver-o-Peso बजार शहर र को दैनिक जीवनमा तपाईंलाई डुबाउनको लागि अनुमति दिनेछ मार्गल डे लास गार्जास पार्क यसले तपाईंलाई जलीय चराहरूको सयौं प्रजाति देखाउँदछ। अन्तमा, भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस् रोड्रिग्स एल्वेस बोटानिकल गार्डेन, बोईस डे बोलोनबाट प्रेरित पेरिस यसको रूपरेखामा, तर वनस्पतिको मूल प्रजातिहरूको साथ।
निष्कर्षमा र को बारे मा विवाद मा फर्कदै संसारको सबैभन्दा लामो नदी, हामी तपाईलाई बताउँछौं कि लम्बाई द्वारा छ नील। तर, भोल्यूम द्वारा, अमेजनले शीर्षक छिन्यो। जे भए पनि दुबैको बैंकमा छ धेरै आश्चर्यहरु तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » संसारमा सबैभन्दा लामो नदी